Tag: gif animated | Martech Zone
Sida Loogu Sameeyo Muuqaalo Cajiib Ah Sheekooyinka Instagram
Jimcaha, Sebtember 18, 2020 Sabti, Sebtember 19, 2020 Hardik Oza
Instagram waxay leedahay in kabadan 500 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon maalin kasta, taas oo macnaheedu yahay ugu yaraan kalabar guud ahaan saldhigga guud ee isticmaalaha aragtida Instagram ama abuuro sheekooyin maalin kasta. Sheekooyinka Instagram waxay ka mid yihiin siyaabaha ugu wanaagsan ee aad ugu adeegsan karto inaad kula xiriirto dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato sababo la xiriira astaamaheeda cajiibka ah ee weligood isbeddelaya. Sida laga soo xigtay tirakoob, boqolkiiba 68 ee millennials-yada ayaa sheegaya inay daawadaan sheekooyinka Instagram. Iyada oo tirada badan ee isticmaaleyaashu ay raacaan asxaabta, dadka caanka ah,
In badan oo ka mid ah tilmaamaha ku-habboon ee iimaylka ee aan akhriyo, khubaradu waxay inta badan ka niyad-jabiyaan suuq-geynta emaylka inay soo saaraan e-mayl hal sawir leh. Weligay ma noqonin qof jecel xeerarka sidan oo kale ah, marwalba waxaan u maleynayaa isku dayga xeelado gaar ah inay mudan yihiin imtixaanka. Maanta uun, waxaan ka helay e-maylkan cajiibka ah shirkadda Netflix. Waxay lahayd qadka mawduuca: Waxqabadka tuhunka leh █████ Yaab on Netflix █████ Markaad furto emaylka, waa farriin keliya oo u muuqata oo kaliya
Wicitaanka Waxqabadka: Waa maxay CTA? Kordhi CTR-gaaga!
Axad, Agoosto 7, 2016 Jimcaha, Agoosto 12, 2016 Douglas Karr
Waxay umuuqataa wax iska cad marka aad weydiiso su'aasha, Waa maxay Wicitaanka Waxqabadka ama CTA, laakiin inta badan waa fursad luntay ama fursad lagu xadgudbay oo lagu kaxeeyo akhristayaasha, dhagaystayaasha, iyo kuwa raacsan si qoto dheer ula shaqeynta astaantaada. Waa maxay Wicitaanka Waxqabadka? Wicitaanka ficilku wuxuu caadi ahaan yahay gobol shaashadda kaxeeya oo akhristaha ku riixaya inuu gujiyo si uu ula qabsado sumcad. Mararka qaarkood waa sawir, marna badhanka uun,